ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး Fighting ဂိမ်းပြိုင်ပွဲ EVO 2019 – Gaming Noodle
August လထဲမှာ Gamer တွေတော်တော်များများအတွက် ရင်ခုန်စရာတွေနဲ့ ပြည့်နှက်နေပါတယ်။ အများစောင့်နေကြတဲ့ Dota2The International9မလာခင်မှာပဲ စစချင်း August2ရက်နေ့မှာ အကြီးဆုံး Global Fighting Game Tournament ဖြစ်တဲ့ EVO 2019 ဆိုပြီး လာပါတော့မယ်။
သူ့ထူးခြားချက်က Qualifier ဘာညာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ Event ရောက်မှ ဆက်တိုက် လူတွေအများကြီး ဆော့ကြပြိုင်ကြတာပါ။ ရက်အတိအကျကတော့ ခုလာမယ့် သောကြာမနက်ကနေ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေထိဖြစ်ပါတယ်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ လာ့စ်ဗေးဂစ်မြိ်ု့ရှိ မန္တလေးဘေးဟိုတယ်မှာ ကျင်းပမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
EVO ရဲ့ Prize Pool ကတော့ လာအားပေးမယ့်လူ အရေအတွက်ရယ် ကစားမယ့် Entrance အရေအတွက်နဲ့ တစ်ဂိမ်းချင်းစီက Developer Company တွေအပြင် Sponsor တွေဆီက ရသမျှ အကုန်ပေါင်းပေးတာမို့ ထုတ်မပြသေးပါဘူး။
ခုနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ Nintendo ရဲ့အကြမ်းဆုံး Fighting Game Series ဖြစ်ပါတယ်။ Kirby, Mario, Zelda, Link, အစရှိသဖြင့် Nintendo ရဲ့ နာမည်ကြီးဇာတ်ကောင်တွေအပြင် Capcom က Megaman, Persona5က Joker, Dragon Quest ရဲ့ Hero အစရှိတဲ့ ဧည့်သည် ဇာတ်ကောင်တွေလဲ ပါပါတယ်။
Gameplay အနေနဲ့ကတော့ တခြား Fighters တွေလို ခလုတ်ရှုပ်တာတွေမပါတာမို့ ခုထိ gamer တွေကြားထဲ Smash bros ကို fighting game လို့ခေါ်သင့်မခေါ်သင့် ချနေကြတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ Party Game ကနေ အခြေခံပြီးဖြစ်လာတာမို့ 1v1v1v1 လေးယောက် free for all ကို ဦးစားပေးထားတာကြောင့် ကိုယ်တိုက်ခိုက်မယ့် map က တော်တော်ကိုကျယ်ပါတယ်။ လက်နက်တွေလဲ ပြွတ်နေအောင်ချပေးထားပေမယ့် တကယ့် tournament မှာတော့အဲဒါတွေအပြင် တချို့map တွေကိုပါ ban ထားရပါတယ်။
ပြောနေစရာကိုမလိုပါဘူး Nintendo ရဲ့ Best Selling game မို့ဆော့သင့်တဲ့အထဲကိုပါပါတယ်။ ခက်တာက Nintendo ဆိုတဲ့အတိုင်း သူ့ console တွေကလွဲပြီး ဘယ်မှာမှထွက်မှာမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာ။
2. Street Fighters V
Street Fighters ကတော့ EVO ပြိုင်ပွဲတိုင်းရဲ့စံလိုဖြစ်ပြီး လူတိုင်းသိတဲ့ဂိမ်းမို့ ထွေထွေထူးထူး ပြောစရာရှိမယ် မထင်ပါဘူး။
Gameplay အရကတော့ Anime Fighters တွေနဲ့ယှဉ်ရင် ပိုနှေးပြီး 3D fighter တွေထက်တော့ ပိုမြန်ပါတယ်။ Fighting Game တွေ အကုန်လုံးရဲ့ Basic လို့ပြောလို့ရပါတယ်။
SFV ကထွက်တာကြာပြီ ဖြစ်တာရော Sunday Finals မှာပါတာရောကြောင့် ပွဲအပြီးမှာ SF6ဆိုပြီး Announce လုပ်လာနိုင်ပါတယ်။ တလောက ပြောထားတာကတော့ SF6 အတွက် အစီအစဉ်မရှိသေးဘူးလို့လဲပြောထားပါတယ်။ သေချာတာကတော့ ဘယ်ချိန်ထဆော့ဆော့ ကောင်းတဲ့ဂိမ်းထဲပါတာပါပဲ။ စောင့်ကြည့်လိုက်တာအကောင်းဆုံးပါ။
Tekken7ဟာလဲ Street Fighters လိုပဲ Fighting Game တွေရဲ့အခြေခံအကျဆုံး စံတွေထဲပါပါတယ်။ 3D fighters တွေကိုတစ်ခေတ်ဆန်းတီထွင်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းဆိုလဲမမှားပါဘူး။
Gameplay အရကတော့ တိုက်ခိုက်ရာမှာ SF လို 2D fighter တွေက တိကျတဲ့ လေးထောင့်ကွက် hitbox hurtbox တွေအသုံးပြုပြီး Tekken ကတော့သူ့ရဲ့ 3d model တွေနဲ့ထိမထိကို တွက်ချက်ပါတယ်။ ပြီးရင် neutral, high (overhead), low အပြင် character ရဲ့ဘယ်ညာကိုပါရှောင်လို့ရပြီးအဲအတွက်ပါ hit detect ဖြစ်ပါတယ်။
ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ Tekken လို 3D fighter တွေကအနှေးဆုံး fighting game ထဲမှာပါပါတယ်။ တကယ် online play မှာတော့အဲလောက်မဆိုးပါဘူး။ ပြိုင်ပွဲမှာကြတော့ pro တွေက အမှားမခံချင်တော့neutral play ကိုအရမ်းဦးစားပေးပြီး Footsies မှာပဲ ထိလိုက်ပြန်ဆုတ်လိုက် လုပ်နေကြတာအမြဲမဟုတ်ပေမယ့် များပါတယ်။
တလောကမှ Walking Dead ထဲကဇာတ်ကောင် Negan တို့ DLC ပေးထားတာမို့ အသစ်မလာနိုင်သေးဘူးပြောနိုင်ပေမယ့် ကောက်ချက်ချလို့တော့မရပါဘူး။ သတင်းအတိအကျဘာမှမထွက်ထားတာမို့ Finals day မှာ Tekken 8 ဆိုပြီးချပြလိုက်ရင် ဝယ်မိပါက နှမြောစရာဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ဒီကောင်လဲစောင့်ကြည့်တာအကောင်းဆုံးပါ။ 3D fighter ကိုမှကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ Tekken ကအခြေခံအကျဆုံးဖြစ်ပါတယ်။ ထူးခြားချက်အနေနဲ့ Final Fantasy XV ထဲက Noctis နဲ့ Walking Dead ထဲက Negan တို့ပါဝင်ပါတယ်။
ခုမှစထွက်တဲ့ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ PC မှာတောင်မလာသေးပါဘူး။ EVO ပြိုင်ပွဲနဲ့မှ ကပ်ရက်ထွက်တာမို့ လေ့ကျင့်ဖို့အချိန်ဆိုတာမရှိသလောက်ပါပဲ။ အဲဒါနဲ့ပဲ ယေဘုယျအနေနဲ့ ဘယ်သူမဆို pro ဆိုရင်တောင် မတရားကြမ်းနေတယ်လို့ပြောလို့မရတဲ့အခြေအနေနဲ့ ဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။
Gameplay အနေနဲ့ကတော့ Samurai Shodown ဆိုတဲ့အတိုင်း Samurai ဂိမ်းတစ်ဂိမ်းရဲ့feel အပြည့်ရပါတယ်။ သူ့ရဲ့အနှစ်သာရက ဆာမူရိုင်းဂိမ်းဖြစ်တာနဲ့အညီ တစ်ဖက်လူရဲ့အမှားနဲ့ ကိုယ့်ရဲ့ တုံ့ပြန်မှုအပေါ်မှာ မတရားမူတည်ပါတယ်။ Combo ဆိုတာ မရှိသလောက်ပါပဲ။ Whiff တာတွေလဲ အများကြီးရှိပါတယ်။ ရန်သူ Whiff တာပေါ်မှာ အခွင့်ကောင်းယူနိုင်ရင်ယူနိုင်သလောက် တစ်ချက်တစ်ချက်ကို နစ်နေအောင်ထိပါတယ်။ ကံမကောင်းရင် နေရာယူတာမသေသပ်ရင် hp 70% လောက်ရှိနေတောင် တန်းသေသွားနိုင်ပါတယ်။ ရန်သူ့ဓါးကိုလုပြီးလွှတ်ပစ်တာမျိုးက အစပါပါတယ်။
Combo တွေအလွတ်ကျက်စရာမလိုပဲ အရမ်းရင်ခုန်ရတဲ့ Fighting Game ကစားချင်တဲ့လူတွေ အတွက်တော့ အရမ်းကောင်းပါတယ်။ အသစ်လဲဖြစ်တာမို့ ဘယ်သူမှတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မကွာပါဘူး။ စဆော့လို့ အကောင်းဆုံး fighting game ထဲမှာထိပ်ဆုံးက recommend ပေးပါတယ်။ ဆိုးတာကတော့ PC မှာမထွက်သေးပါဘူး။ ပြီးတော့ ခုမှပြန် reboot တာမို့ အရင် Samurai Shodown မမြင်မကြားဖူးတဲ့လူတွေအတွက် character တွေက နည်းနည်းစိမ်းနေနိုင်ပါတယ်။
Mortal Kombat နဲ့ သူ့ရဲ့ fatality တွေကတော့ လူတိုင်းနဲ့စိမ်းနေမှာမဟုတ်မှန်းသေချာပါတယ်။ ဒီကောင်လဲအသစ်ထွက်ထားတာ လပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်။ Steam မှာဈေးချနေတယ်ဆိုပြီး MKX ကိုသွားမဝယ်မိပါစေနဲ့။ Fighting Game တော်တော်များများကအသစ်ထွက်ပြီးရင် အဟောင်းမှာ လူနည်းသွားပါတယ်။ အဲဒါမို့လဲ တစ်ဂိမ်းနဲ့တစ်ဂိမ်း နှစ်တော်တော်ကြာပြီးမှ အသစ်ထွက်ကြတာ ဖြစ်ပါတယ်။
Gameplay အနေနဲ့ကတော့ Street Fighters နဲ့တော်တော်တူပါတယ်။ ပိုသွက်ပါတယ်။ Combo တွေလဲပိုများပါတယ်။ ကွာသွားတာကတော့ Execution ပိုင်းမှာပါ။ ပုံမှန်ဆို 2d fighters တွေအတွက် block ကာတဲ့ခလုတ်ကနောက်ဆုတ်လိုက်ရင်ရပါတယ်။ MK ကအဲဒါတွေအတွက် Tekken လိုမျိုး ခလုတ်သက်သက်ပါပါတယ်။ Hitbox တွေအစား 3D model ကိုပဲအသုံးပြုပါတယ်။ နည်းနည်းတော့ ကသိကအောက်ဖြစ်ပေမယ့် ရန်သူကို Fatality ကျွေးပြီး လေတိုက်ရတာ အရမ်းဖီးရှိပါတယ်။ EVO မှာကတော့ အဲဒါတွေ တွေ့ရမှာမဟုတ်ပါဘူး။ Pro တွေက ရှုံးပြီဆို တန်းထွက်ကြပါတယ်။
အသစ်ထွက်ထားတဲ့ဂိမ်းမို့ သိပ်ထွေထွေထူးထူးပြောစရာမလိုပါဘူး။ ဆော့ချင်တယ်ဆို တန်းသာ ဝယ်ဆော့လိုက်ပါ။ မကောင်းတဲ့ဘက်ကပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ Gameplay ပိုင်းက အပေါ်ကပြောခဲ့တဲ့ အချက်တွေကလွဲပြီး ကျန်တာ Street Fighters နဲ့သိပ်မကွာပါဘူး။ Lore တွေ Story mode တွေမှာ MK ကိုပိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ အသစ်ချက်ချွတ်ဂိမ်းမို့ ပူစရာမရှိပါဘူး ကိုင်လိုက်ပါ။
6. Under Night In-Birth (Exe:Late[st]) / (UNIST)
သင်မဆော့ဖူးတဲ့အကောင်းဆုံး Fighting Game ဆိုပြီး နာမည်ကြီးနေတဲ့ နှစ်ပေါက်နေတဲ့ဂိမ်းပါ။ နှစ်အဆက်ဆက်ပါလာတဲ့ Smash Bros Melee, The King of Fighters အစရှိသဖြင့်ကို ကျော်တက်လာတဲ့ဂိမ်းမို့ အထူးသဖြင့် melee fan တွေကမကျေနပ်ကြပါဘူး။
Gameplay အရကတော့ စာရေးသူရဲ့အကြိုက်ဆုံး Fighting Game လို့ပြောလို့ရပါတယ်။ Character တွေထဲ တစ်ကောင်နဲ့တစ်ကောင် ကစားပုံလုံးဝမတူပါဘူး။ တစ်ကောင်ချင်းစီမှာ unique ဖြစ်တဲ့ ability တွေပါပါတယ်။ Combo ကော Neutral ကောနှစ်ခုလုံးအရေးကြီးပါတယ်။
Anime Fighters ထဲမှာအခက်ဆုံးနဲ့ Guilty Gears ပြီးရင်တစ်ခုတည်းသော 1vs1 fighting game ဖြစ်ပါတယ်။ Combo မရသူတွေအတွက် auto combo စနစ်လဲပါတာမို့ အရမ်းသေသပ်ပါတယ်။
တလောက Under Night In-Birth (Exe:Late[clr]) ဆိုပြီး version အသစ်ထွက်မယ်လို့ leak ထွက်ထားတာမို့မှန်းလို့မရပါဘူး။ Story mode ကလဲတော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဂိမ်းမဆော့ချင်လဲ Visual Novel mode ပါပါတယ်။ EVO မှာဒီနှစ်မှ စပါတာဖြစ်ပြီး Entrance 1100 ကျော်တာမို့ Community ပိုင်းကတော့ပြောစရာမရှိပါဘူး။
EVO 2018 မှာ entrance ရော viewer ရော စံချိန်တင်ခဲ့တဲ့ဂိမ်းက တစ်နှစ်ထဲနဲ့အဆင့် ၇ ထိ ဆင်းသွားတာ တော်တော်ကြည့်ရဆိုးပါတယ်။ ပြသနာကတော့ ဒီနှစ်ထဲမှာ Jump Force ဂိမ်းအသစ်ထွက်မှာမို့ စိတ်ဝင်စားမှုတက်အောင် DBFZ ပြိုင်ပွဲအကုန်လုံးကို ရုတ်သိမ်းလိုက်ပြီဆိုတဲ့ သတင်းကနေ စသွားတာပါ။
အဲမှာအကုန် ဝရုန်းသုန်းကားဖြစ်ပြီး Pro တွေကလဲ ဂိမ်းတွေပြောင်း မကျေနပ်တဲ့လူတွေကလဲ reddit မှာထိုင်ဆဲကြပါတယ်။ ပထမဆုံး ဂိမ်းကိုဖြန့်တဲ့ Bandai Namco ကို လူတွေအုပ်လိုက်ကြီးသွားဆဲပါတယ်။ ဟိုကသူတို့နဲ့မဆိုင်ပါဘူးငြင်းတော့ Dragon Ball ip ကိုပိုင်တဲ့ Shonen Jump တွေကော Shueisha တွေကော mangaka အဆုံးအထိ ပြသနာအကြီးကြီး တက်သွားပါတယ်။ နောက်ဆုံးအသစ်ထွက် Jump Force game က ထင်သလောက် မဖြစ်သွားတဲ့အပြင် နာမည်ပါပျက်သွားတော့ ပြန်အလျှော့ပေးလိုက်ရပေမယ့် အခြေအနေကခုလိုဖြစ်သွားပါတယ်။
Gameplay ပိုင်းကတော့ DragonBall ဆိုတဲ့အတိုင်းလုံးဝ DragonBall feeling အပြည့်ရပါတယ်။ 3v3 Tag game ဖြစ်တာမို့ အသင်းတည်ဆောက်တတ်ဖို့လဲလိုပါတယ်။ ကစားပုံကတော့ Neutral ကိုဦးစားပေးပြီး ခံစစ်ထက် တိုက်စစ်ကပိုအရေးကြီးပါတယ်။ အခြေအနေမပေးရင် ကိုယ့်ဘက်က အမှားများရင် ချက်ချင်း ၃ ကောင်မှာ တစ်ကောင်တန်းသေသွားနိုင်ပါတယ်။ Auto Combo ပါတာမို့ casual တွေအတွက်လဲ အဆင်ပြေပါတယ်။ ပွဲတွေက မမြန်ပေမယ့် အရမ်းပြင်းထန်ပါတယ်။ တကယ့် DragonBall ရုပ်ရှင်ကြည့်နေရသလိုပါပဲ။ အဲဒါမို့လဲ မနှစ်ကစံချိန်ချိုးခဲ့တာမဆန်းပါဘူး။ စာရေးသူရဲ့ ကိုယ်ပိုင်အမြင်ကိုပြောရရင်တော့ Character Roster မှာ Goku တွေများနေတာပဲပြောစရာရှိပါတယ် lol
ဒီကောင်ကတော့ တစ်နှစ်သက်တမ်းရှိပြီးဆက်တိုက် support နေဦးမှာဆိုတော့ ခုချိန်ဝယ်ဆော့ရင် တော်တော်ကို ကောင်းတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ DragonBall FighterZ2ဆိုပြီးလဲ မလာနိုင်ပါဘူး။ လုံးဝ ဝုန်းဒိုင်းကြဲချနေရတာလဲကြိုက် စနစ်လဲကျတဲ့ Fighting Game ဆော့ချင်ရင်တော့ DBFZ သာစဆော့လိုက်ပါ။
8. Soul Calibur 6
Soul Calibur ကတော့အရှင်းဆုံးပြောရရင် Tekken ကကောင်တွေကို ဓါးတွေတုတ်တွေ တပ်ပေးထားတာပါ။ Character တိုင်းလိုလို လက်နက်ပါပါတယ်။ Soul Calibur ရဲ့အဓိကအနှစ်သာရက Character Creation ပါ။ အရမ်းနက်နဲပြီး Pepsi Man ကအစ Batman အဆုံး Tom and Jerry အထိ လုပ်လို့ရပါတယ်။ Online play ကတော့ အဲဒါနဲ့တင် အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
Gameplay ကတော့ခုနကပြောသလိုပဲ Tekken ကို ဓါးတပ်ပေးထားတာပါ။ ပိုပြီးသွက်ပါတယ်။ စာရေးသူအနေနဲ့ကတော့ Tekken နဲ့ SC6 ဆိုရင် SC6 ပဲရွေးမှာပါ။ World Building ပိုင်းကလဲ Fantasy ပိုင်းကိုသွားတာမို့ Dark Souls တို့ဘာတို့အပြင် RPG game fan တွေအနေနဲ့ပိုကြိုက်ကြပါလိမ့်မယ်။ ထူးခြားတာတစ်ခုကတော့ ဟိုးအရင် Virtua Fighters လိုမျိုး Ring Out စနစ်ပါပါတယ်။ ကွင်းပြင်ထွက် or ချောက်ထဲကျရင်ရှုံးပါတယ်။ အဲတစ်ခုနဲ့တင်ထင်ထားတာထက်ပိုခက်သွားပါတယ် lol
ဒီကောင်လဲ အသစ်ဖြစ်တာမို့ ဝယ်ဆော့မယ်ဆို Future Proof ဖြစ်ပါတယ်။ Online မှာ သင့် Character က Kamen Rider လိုလုပ်ထားရင် ငှက်ပျောသီးခိုင်နဲ့ရိုက်တဲ့ Donkey Kong နဲ့လဲ ချရနိုင်ပါတယ်။ ထူးခြားတာကတော့ The Witcher ထဲက Geralt of Rivia နဲ့ Nier: Automata ဂိမ်းထဲက 2B ပါပါတယ်။ နောက်လဲထပ်လာဦးမယ်ပြောပါတယ်။
9. Blazblue Cross Tag Battle (BBTAG)
EVO2019 ရဲ့ game list ထဲမှာ ပြိုင်ပွဲဝင် အနည်းဆုံးဆိုပေမယ့် ခေတ်အဆက်ဆက် နောက်ဆုံးရတဲ့ game တွေထဲမှာ ပြိုင်ပွဲဝင်အများဆုံး ဂိမ်းအဖြစ်စံချိန်တင်ထားတဲ့ ဂ်ိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဒီနှစ် EVO ကလူအရမ်းစိတ်ဝင်စားမှုများနေတဲ့ EVO လို့ပြောရတာဖြစ်ပါတယ်။
BBTAG ရဲ့ပြသနာက Skill Ceiling အရလူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ရဲ့လက်ရည်က အရမ်း ကွာနိုင်ပါတယ်။ Arcsystemworks ရဲ့ Blazblue IP ထဲမှာ autocombo ပထမဆုံးစပါတဲ့ဂိမ်း မဟုတ်ပေမယ့် autocombo ကို ခလုတ်တိုင်းမှာထည့်ပေးထားတဲ့ ပထမဆုံးဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းကျိူးအနေနဲ့က casual သမားတွေလဲ စိတ်ကျေနပ်အောင်ဆော့နိုင်သွားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် combo wombo တွေကိုတိကျအောင်သုံးနိုင် အသစ်ဖန်တီးနိုင်တဲ့လူတွေနဲ့ယှဉ်ရင် လက်အရမ်းကွာသွားပါတယ်။
Gameplay အနေနဲ့က BBTAG ဆိုတဲ့အတိုင်းသူ့ရဲ့အနှစ်သာရက Tag battle ကိုယ့် character ရဲ့ partner နဲ့တွဲပြီး အခြေအနေပေါင်းစုံကို ဖန်တီးနိုင်စွမ်းပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။ သူ့ရဲ့ထူးခြားချက် ရှေ့က Marvel Vs Capcom လို Tag fighting game တွေနဲ့မတူတာကတော့ screen တစ်ခုထဲမှာ character လေးကောင်တစ်ပြိုင်တည်းချနေလို့ရပါတယ်။ Easy to Learn, Hard to Master ဆိုတဲ့ဂိမ်းလို့ ပြောလို့ရပါတယ်။
Hardcore သမားတွေကြားထဲ casual တွေလဲရှိနေတာမို့ ပြိုင်ပွဲဝင်ပြီဆို တကယ်မဝင်နိုင်တဲ့လူတွေ ပိုများနေပါတယ်။ ဒါပေမယ့် viewership များတာကြောင့် EVO2019 ရဲ့ Sunday Finals ဂိမ်းတွေထဲမှာနေရာရထားပါတယ်။ Crossover Game ဖြစ်ပြီး Blazblue, Persona4, Under Night in-Birth (Unist), Arcana Hearts နဲ့ RWBY fan တွေဆိုရင် အရမ်းကြိုက်ကြမှာ သေချာပါတယ်။ Unist လူသိပိုများပြီး EVO list ထဲတန်းဝင်လာတာ BBTAG ကိုထိပ်ဆုံးကကျေးဇူးတင်ရမှာပါ။
ပြီးရင် သက်တမ်း ၁ နှစ်ဝန်းကျင်သာရှိသေးပြီး နောက် ၂ နှစ် ၃ နှစ်လောက်ထိ support ပေးပြီး နောက်ထပ် join မယ့် series update တွေရှိနေမယ့်ဂိမ်းမို့ anime fighters တွေကြိုက်ရင် ခုချိန်ခုန်ဝင်လို့ အကောင်းဆုံးဂိမ်းထဲမှာပါပါတယ်။
EVO2019 ရဲ့ Finals တွေဆော့မယ့်ရက်အတိအကျတွေကတော့ Friday မှာ Soul Calibur6ကိုအပြီးဆော့မှာဖြစ်ပြီး Saturday မှာ UNIST>> DragonBall FighterZ>> Samurai Shodown>> Mortal Kombat 11 တို့ကိုအပြီးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်တာကတော့ Sunday Final ပါ။ ဂိမ်းအသစ် Announcement တွေလဲလုပ်တတ်တာမို့ အရမ်းအရေးကြီးတဲ့နေ့ပါ။ Sunday Finals ကိုကြည့်ချင်ရင် သက်သက်လက်မှတ်ဝယ်ရပါသေးတယ်။ Sunday Finals အတွက် ဂိမ်းတွေကတော့ BBTAG>> Street Fighters V>> Tekken7နဲ့နောက်ဆုံးအပိတ်ကတော့ Super Smash Bros Ultimate နဲ့အဆုံးသတ်မှာဖြစ်ပါတယ်။
ထူးခြားချက်အနေနဲ့ကတော့ EVO အတွင်းမှာ ပါဝင်တဲ့ဂိမ်းအကုန်လုံးကို Steam မှာအချိန်ပိုင်း အလကားပေးဆော့ထားတတ်လို့ စမ်းကြည့်လို့ရနိုင်ပါကြောင်း!
ကမ်ဘာ့အကွီးဆုံး Fighting ဂိမျးပွိုငျပှဲ EVO 2019
August လထဲမှာ Gamer တှတေျောတျောမြားမြားအတှကျ ရငျခုနျစရာတှနေဲ့ ပွညျ့နှကျနပေါတယျ။ အမြားစောငျ့နကွေတဲ့ Dota2The International9မလာခငျမှာပဲ စစခငျြး August2ရကျနမှေ့ာ အကွီးဆုံး Global Fighting Game Tournament ဖွဈတဲ့ EVO 2019 ဆိုပွီး လာပါတော့မယျ။
သူ့ထူးခွားခကျြက Qualifier ဘာညာ ဘာမှမရှိပါဘူး။ Event ရောကျမှ ဆကျတိုကျ လူတှအေမြားကွီး ဆော့ကွပွိုငျကွတာပါ။ ရကျအတိအကကြတော့ ခုလာမယျ့ သောကွာမနကျကနေ တနင်ျဂနှနေေ့ ညနထေိဖွဈပါတယျ။ အမရေိကနျနိုငျငံ လာ့ဈဗေးဂဈမွို့ရှိ မန်တလေးဘေးဟိုတယျမှာ ကငျြးပမှာ ဖွဈပါတယျ။
EVO ရဲ့ Prize Pool ကတော့လာအားပေးမယျ့လူ အရအေတှကျရယျ ကစားမယျ့ Entrance အရအေတှကျနဲ့ တဈဂိမျးခငျြးစီက Developer Company တှအေပွငျ Sponsor တှဆေီက ရသမြှ အကုနျပေါငျးပေးတာမို့ ထုတျမပွသေးပါဘူး။
ခုနောကျဆုံးထှကျထားတဲ့ Nintendo ရဲ့အကွမျးဆုံး Fighting Game Series ဖွဈပါတယျ။ Kirby, Mario, Zelda, Link, အစရှိသဖွငျ့ Nintendo ရဲ့ နာမညျကွီးဇာတျကောငျတှအေပွငျ Capcom က Megaman, Persona5က Joker, Dragon Quest ရဲ့ Hero အစရှိတဲ့ ဧညျ့သညျ ဇာတျကောငျတှလေဲ ပါပါတယျ။
Gameplay အနနေဲ့ကတော့ တခွား Fighters တှလေို ခလုတျရှုပျတာတှမေပါတာမို့ ခုထိ gamer တှကွေားထဲ Smash bros ကို fighting game လို့ချေါသငျ့မချေါသငျ့ ခနြကွေတုနျးဖွဈပါတယျ။ Party Game ကနေ အခွခေံပွီးဖွဈလာတာမို့ 1v1v1v1 လေးယောကျ free for all ကို ဦးစားပေးထားတာကွောငျ့ ကိုယျတိုကျခိုကျမယျ့ map က တျောတျောကိုကယျြပါတယျ။ လကျနကျတှလေဲ ပွှတျနအေောငျခပြေးထားပမေယျ့ တကယျ့ tournament မှာတော့အဲဒါတှအေပွငျ တခြို့map တှကေိုပါ ban ထားရပါတယျ။
ပွောနစေရာကိုမလိုပါဘူး Nintendo ရဲ့ Best Selling game မို့ဆော့သငျ့တဲ့အထဲကိုပါပါတယျ။ ခကျတာက Nintendo ဆိုတဲ့အတိုငျး သူ့ console တှကေလှဲပွီး ဘယျမှာမှထှကျမှာမဟုတျပါဘူးခငျဗြာ။
Street Fighters ကတော့ EVO ပွိုငျပှဲတိုငျးရဲ့စံလိုဖွဈပွီး လူတိုငျးသိတဲ့ဂိမျးမို့ ထှထှေထေူးထူး ပွောစရာရှိမယျ မထငျပါဘူး။
Gameplay အရကတော့ Anime Fighters တှနေဲ့ယှဉျရငျ ပိုနှေးပွီး 3D fighter တှထေကျတော့ ပိုမွနျပါတယျ။ Fighting Game တှေ အကုနျလုံးရဲ့ Basic လို့ပွောလို့ရပါတယျ။
SFV ကထှကျတာကွာပွီ ဖွဈတာရော Sunday Finals မှာပါတာရောကွောငျ့ ပှဲအပွီးမှာ SF6ဆိုပွီး Announce လုပျလာနိုငျပါတယျ။ တလောက ပွောထားတာကတော့ SF6 အတှကျ အစီအစဉျမရှိသေးဘူးလို့လဲပွောထားပါတယျ။ သခြောတာကတော့ ဘယျခြိနျထဆော့ဆော့ ကောငျးတဲ့ဂိမျးထဲပါတာပါပဲ။ စောငျ့ကွညျ့လိုကျတာအကောငျးဆုံးပါ။
Tekken7ဟာလဲ Street Fighters လိုပဲ Fighting Game တှရေဲ့အခွခေံအကဆြုံး စံတှထေဲပါပါတယျ။ 3D fighters တှကေိုတဈခတျေဆနျးတီထှငျခဲ့တဲ့ဂိမျးဆိုလဲမမှားပါဘူး။
Gameplay အရကတော့ တိုကျခိုကျရာမှာ SF လို 2D fighter တှကေ တိကတြဲ့ လေးထောငျ့ကှကျ hitbox hurtbox တှအေသုံးပွုပွီး Tekken ကတော့သူ့ရဲ့ 3d model တှနေဲ့ထိမထိကို တှကျခကျြပါတယျ။ ပွီးရငျ neutral, high (overhead), low အပွငျ character ရဲ့ဘယျညာကိုပါရှောငျလို့ရပွီးအဲအတှကျပါ hit detect ဖွဈပါတယျ။
ပုံမှနျအားဖွငျ့တော့ Tekken လို 3D fighter တှကေအနှေးဆုံး fighting game ထဲမှာပါပါတယျ။ တကယျ online play မှာတော့အဲလောကျမဆိုးပါဘူး။ ပွိုငျပှဲမှာကွတော့ pro တှကေ အမှားမခံခငျြတော့neutral play ကိုအရမျးဦးစားပေးပွီး Footsies မှာပဲ ထိလိုကျပွနျဆုတျလိုကျ လုပျနကွေတာအမွဲမဟုတျပမေယျ့ မြားပါတယျ။
တလောကမှ Walking Dead ထဲကဇာတျကောငျ Negan တို့ DLC ပေးထားတာမို့ အသဈမလာနိုငျသေးဘူးပွောနိုငျပမေယျ့ ကောကျခကျြခလြို့တော့မရပါဘူး။ သတငျးအတိအကဘြာမှမထှကျထားတာမို့ Finals day မှာ Tekken 8 ဆိုပွီးခပြွလိုကျရငျ ဝယျမိပါက နှမွောစရာဖွဈနိုငျပါတယျ။
ဒီကောငျလဲစောငျ့ကွညျ့တာအကောငျးဆုံးပါ။ 3D fighter ကိုမှကွိုကျတယျဆိုရငျတော့ Tekken ကအခွခေံအကဆြုံးဖွဈပါတယျ။ ထူးခွားခကျြအနနေဲ့ Final Fantasy XV ထဲက Noctis နဲ့ Walking Dead ထဲက Negan တို့ပါဝငျပါတယျ။
ခုမှစထှကျတဲ့ဂိမျးဖွဈပါတယျ။ PC မှာတောငျမလာသေးပါဘူး။ EVO ပွိုငျပှဲနဲ့မှ ကပျရကျထှကျတာမို့ လကေ့ငျြ့ဖို့အခြိနျဆိုတာမရှိသလောကျပါပဲ။ အဲဒါနဲ့ပဲ ယဘေုယအြနနေဲ့ ဘယျသူမဆို pro ဆိုရငျတောငျ မတရားကွမျးနတေယျလို့ပွောလို့မရတဲ့အခွအေနနေဲ့ ဂိမျးဖွဈပါတယျ။
Gameplay အနနေဲ့ကတော့ Samurai Shodown ဆိုတဲ့အတိုငျး Samurai ဂိမျးတဈဂိမျးရဲ့feel အပွညျ့ရပါတယျ။ သူ့ရဲ့အနှဈသာရက ဆာမူရိုငျးဂိမျးဖွဈတာနဲ့အညီ တဈဖကျလူရဲ့အမှားနဲ့ ကိုယျ့ရဲ့ တုံ့ပွနျမှုအပျေါမှာ မတရားမူတညျပါတယျ။ Combo ဆိုတာ မရှိသလောကျပါပဲ။ Whiff တာတှလေဲ အမြားကွီးရှိပါတယျ။ ရနျသူ Whiff တာပျေါမှာ အခှငျ့ကောငျးယူနိုငျရငျယူနိုငျသလောကျ တဈခကျြတဈခကျြကို နဈနအေောငျထိပါတယျ။ ကံမကောငျးရငျ နရောယူတာမသသေပျရငျ hp 70% လောကျရှိနတေောငျ တနျးသသှေားနိုငျပါတယျ။ ရနျသူ့ဓါးကိုလုပွီးလှတျပဈတာမြိုးက အစပါပါတယျ။
Combo တှအေလှတျကကျြစရာမလိုပဲ အရမျးရငျခုနျရတဲ့ Fighting Game ကစားခငျြတဲ့လူတှေ အတှကျတော့ အရမျးကောငျးပါတယျ။ အသဈလဲဖွဈတာမို့ ဘယျသူမှတဈယောကျနဲ့တဈယောကျ မကှာပါဘူး။ စဆော့လို့ အကောငျးဆုံး fighting game ထဲမှာထိပျဆုံးက recommend ပေးပါတယျ။ ဆိုးတာကတော့ PC မှာမထှကျသေးပါဘူး။ ပွီးတော့ ခုမှပွနျ reboot တာမို့ အရငျ Samurai Shodown မမွငျမကွားဖူးတဲ့လူတှအေတှကျ character တှကေ နညျးနညျးစိမျးနနေိုငျပါတယျ။
Mortal Kombat နဲ့ သူ့ရဲ့ fatality တှကေတော့ လူတိုငျးနဲ့စိမျးနမှောမဟုတျမှနျးသခြောပါတယျ။ ဒီကောငျလဲအသဈထှကျထားတာ လပိုငျးပဲရှိပါသေးတယျ။ Steam မှာဈေးခနြတေယျဆိုပွီး MKX ကိုသှားမဝယျမိပါစနေဲ့။ Fighting Game တျောတျောမြားမြားကအသဈထှကျပွီးရငျ အဟောငျးမှာ လူနညျးသှားပါတယျ။ အဲဒါမို့လဲ တဈဂိမျးနဲ့တဈဂိမျး နှဈတျောတျောကွာပွီးမှ အသဈထှကျကွတာ ဖွဈပါတယျ။
Gameplay အနနေဲ့ကတော့ Street Fighters နဲ့တျောတျောတူပါတယျ။ ပိုသှကျပါတယျ။ Combo တှလေဲပိုမြားပါတယျ။ ကှာသှားတာကတော့ Execution ပိုငျးမှာပါ။ ပုံမှနျဆို 2d fighters တှအေတှကျ block ကာတဲ့ခလုတျကနောကျဆုတျလိုကျရငျရပါတယျ။ MK ကအဲဒါတှအေတှကျ Tekken လိုမြိုး ခလုတျသကျသကျပါပါတယျ။ Hitbox တှအေစား 3D model ကိုပဲအသုံးပွုပါတယျ။ နညျးနညျးတော့ ကသိကအောကျဖွဈပမေယျ့ ရနျသူကို Fatality ကြှေးပွီး လတေိုကျရတာ အရမျးဖီးရှိပါတယျ။ EVO မှာကတော့ အဲဒါတှေ တှရေ့မှာမဟုတျပါဘူး။ Pro တှကေ ရှုံးပွီဆို တနျးထှကျကွပါတယျ။
အသဈထှကျထားတဲ့ဂိမျးမို့ သိပျထှထှေထေူးထူးပွောစရာမလိုပါဘူး။ ဆော့ခငျြတယျဆို တနျးသာ ဝယျဆော့လိုကျပါ။ မကောငျးတဲ့ဘကျကပွောရမယျဆိုရငျတော့ Gameplay ပိုငျးက အပျေါကပွောခဲ့တဲ့ အခကျြတှကေလှဲပွီး ကနျြတာ Street Fighters နဲ့သိပျမကှာပါဘူး။ Lore တှေ Story mode တှမှော MK ကိုပိုကွိုကျတယျဆိုရငျတော့ အသဈခကျြခြှတျဂိမျးမို့ ပူစရာမရှိပါဘူး ကိုငျလိုကျပါ။
သငျမဆော့ဖူးတဲ့အကောငျးဆုံး Fighting Game ဆိုပွီး နာမညျကွီးနတေဲ့ နှဈပေါကျနတေဲ့ဂိမျးပါ။ နှဈအဆကျဆကျပါလာတဲ့ Smash Bros Melee, The King of Fighters အစရှိသဖွငျ့ကို ကြျောတကျလာတဲ့ဂိမျးမို့ အထူးသဖွငျ့ melee fan တှကေမကနြေပျကွပါဘူး။
Gameplay အရကတော့ စာရေးသူရဲ့အကွိုကျဆုံး Fighting Game လို့ပွောလို့ရပါတယျ။ Character တှထေဲ တဈကောငျနဲ့တဈကောငျ ကစားပုံလုံးဝမတူပါဘူး။ တဈကောငျခငျြးစီမှာ unique ဖွဈတဲ့ ability တှပေါပါတယျ။ Combo ကော Neutral ကောနှဈခုလုံးအရေးကွီးပါတယျ။
Anime Fighters ထဲမှာအခကျဆုံးနဲ့ Guilty Gears ပွီးရငျတဈခုတညျးသော 1vs1 fighting game ဖွဈပါတယျ။ Combo မရသူတှအေတှကျ auto combo စနဈလဲပါတာမို့ အရမျးသသေပျပါတယျ။
တလောက Under Night In-Birth (Exe:Late[clr]) ဆိုပွီး version အသဈထှကျမယျလို့ leak ထှကျထားတာမို့မှနျးလို့မရပါဘူး။ Story mode ကလဲတျောတျောကောငျးပါတယျ။ ဂိမျးမဆော့ခငျြလဲ Visual Novel mode ပါပါတယျ။ EVO မှာဒီနှဈမှ စပါတာဖွဈပွီး Entrance 1100 ကြျောတာမို့ Community ပိုငျးကတော့ပွောစရာမရှိပါဘူး။
EVO 2018 မှာ entrance ရော viewer ရော စံခြိနျတငျခဲ့တဲ့ဂိမျးက တဈနှဈထဲနဲ့အဆငျ့ ၇ ထိ ဆငျးသှားတာ တျောတျောကွညျ့ရဆိုးပါတယျ။ ပွသနာကတော့ ဒီနှဈထဲမှာ Jump Force ဂိမျးအသဈထှကျမှာမို့ စိတျဝငျစားမှုတကျအောငျ DBFZ ပွိုငျပှဲအကုနျလုံးကို ရုတျသိမျးလိုကျပွီဆိုတဲ့ သတငျးကနေ စသှားတာပါ။
အဲမှာအကုနျ ဝရုနျးသုနျးကားဖွဈပွီး Pro တှကေလဲ ဂိမျးတှပွေောငျး မကနြေပျတဲ့လူတှကေလဲ reddit မှာထိုငျဆဲကွပါတယျ။ ပထမဆုံး ဂိမျးကိုဖွနျ့တဲ့ Bandai Namco ကို လူတှအေုပျလိုကျကွီးသှားဆဲပါတယျ။ ဟိုကသူတို့နဲ့မဆိုငျပါဘူးငွငျးတော့ Dragon Ball ip ကိုပိုငျတဲ့ Shonen Jump တှကေော Shueisha တှကေော mangaka အဆုံးအထိ ပွသနာအကွီးကွီး တကျသှားပါတယျ။ နောကျဆုံးအသဈထှကျ Jump Force game က ထငျသလောကျ မဖွဈသှားတဲ့အပွငျ နာမညျပါပကျြသှားတော့ ပွနျအလြှော့ပေးလိုကျရပမေယျ့ အခွအေနကေခုလိုဖွဈသှားပါတယျ။
Gameplay ပိုငျးကတော့ DragonBall ဆိုတဲ့အတိုငျးလုံးဝ DragonBall feeling အပွညျ့ရပါတယျ။ 3v3 Tag game ဖွဈတာမို့ အသငျးတညျဆောကျတတျဖို့လဲလိုပါတယျ။ ကစားပုံကတော့ Neutral ကိုဦးစားပေးပွီး ခံစဈထကျ တိုကျစဈကပိုအရေးကွီးပါတယျ။ အခွအေနမေပေးရငျ ကိုယျ့ဘကျက အမှားမြားရငျ ခကျြခငျြး ၃ ကောငျမှာ တဈကောငျတနျးသသှေားနိုငျပါတယျ။ Auto Combo ပါတာမို့ casual တှအေတှကျလဲ အဆငျပွပေါတယျ။ ပှဲတှကေ မမွနျပမေယျ့ အရမျးပွငျးထနျပါတယျ။ တကယျ့ DragonBall ရုပျရှငျကွညျ့နရေသလိုပါပဲ။ အဲဒါမို့လဲ မနှဈကစံခြိနျခြိုးခဲ့တာမဆနျးပါဘူး။ စာရေးသူရဲ့ ကိုယျပိုငျအမွငျကိုပွောရရငျတော့ Character Roster မှာ Goku တှမြေားနတောပဲပွောစရာရှိပါတယျ lol
ဒီကောငျကတော့ တဈနှဈသကျတမျးရှိပွီးဆကျတိုကျ support နဦေးမှာဆိုတော့ ခုခြိနျဝယျဆော့ရငျ တျောတျောကို ကောငျးတဲ့အခြိနျဖွဈပါတယျ။ DragonBall FighterZ2ဆိုပွီးလဲ မလာနိုငျပါဘူး။ လုံးဝ ဝုနျးဒိုငျးကွဲခနြရေတာလဲကွိုကျ စနဈလဲကတြဲ့ Fighting Game ဆော့ခငျြရငျတော့ DBFZ သာစဆော့လိုကျပါ။
Soul Calibur ကတော့အရှငျးဆုံးပွောရရငျ Tekken ကကောငျတှကေို ဓါးတှတေုတျတှေ တပျပေးထားတာပါ။ Character တိုငျးလိုလို လကျနကျပါပါတယျ။ Soul Calibur ရဲ့အဓိကအနှဈသာရက Character Creation ပါ။ အရမျးနကျနဲပွီး Pepsi Man ကအစ Batman အဆုံး Tom and Jerry အထိ လုပျလို့ရပါတယျ။ Online play ကတော့ အဲဒါနဲ့တငျ အရမျးပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ။
Gameplay ကတော့ခုနကပွောသလိုပဲ Tekken ကို ဓါးတပျပေးထားတာပါ။ ပိုပွီးသှကျပါတယျ။ စာရေးသူအနနေဲ့ကတော့ Tekken နဲ့ SC6 ဆိုရငျ SC6 ပဲရှေးမှာပါ။ World Building ပိုငျးကလဲ Fantasy ပိုငျးကိုသှားတာမို့ Dark Souls တို့ဘာတို့အပွငျ RPG game fan တှအေနနေဲ့ပိုကွိုကျကွပါလိမျ့မယျ။ ထူးခွားတာတဈခုကတော့ ဟိုးအရငျ Virtua Fighters လိုမြိုး Ring Out စနဈပါပါတယျ။ ကှငျးပွငျထှကျ or ခြောကျထဲကရြငျရှုံးပါတယျ။ အဲတဈခုနဲ့တငျထငျထားတာထကျပိုခကျသှားပါတယျ lol
ဒီကောငျလဲ အသဈဖွဈတာမို့ ဝယျဆော့မယျဆို Future Proof ဖွဈပါတယျ။ Online မှာ သငျ့ Character က Kamen Rider လိုလုပျထားရငျ ငှကျပြောသီးခိုငျနဲ့ရိုကျတဲ့ Donkey Kong နဲ့လဲ ခရြနိုငျပါတယျ။ ထူးခွားတာကတော့ The Witcher ထဲက Geralt of Rivia နဲ့ Nier: Automata ဂိမျးထဲက 2B ပါပါတယျ။ နောကျလဲထပျလာဦးမယျပွောပါတယျ။
EVO2019 ရဲ့ game list ထဲမှာ ပွိုငျပှဲဝငျ အနညျးဆုံးဆိုပမေယျ့ ခတျေအဆကျဆကျ နောကျဆုံးရတဲ့ game တှထေဲမှာ ပွိုငျပှဲဝငျအမြားဆုံး ဂိမျးအဖွဈစံခြိနျတငျထားတဲ့ ဂိမျးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ဒီနှဈ EVO ကလူအရမျးစိတျဝငျစားမှုမြားနတေဲ့ EVO လို့ပွောရတာဖွဈပါတယျ။
BBTAG ရဲ့ပွသနာက Skill Ceiling အရလူတဈယောကျနဲ့တဈယောကျရဲ့လကျရညျက အရမျး ကှာနိုငျပါတယျ။ Arcsystemworks ရဲ့ Blazblue IP ထဲမှာ autocombo ပထမဆုံးစပါတဲ့ဂိမျး မဟုတျပမေယျ့ autocombo ကို ခလုတျတိုငျးမှာထညျ့ပေးထားတဲ့ ပထမဆုံးဂိမျးဖွဈပါတယျ။ ကောငျးကြိူးအနနေဲ့က casual သမားတှလေဲ စိတျကနြေပျအောငျဆော့နိုငျသှားပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ combo wombo တှကေိုတိကအြောငျသုံးနိုငျ အသဈဖနျတီးနိုငျတဲ့လူတှနေဲ့ယှဉျရငျ လကျအရမျးကှာသှားပါတယျ။
Gameplay အနနေဲ့က BBTAG ဆိုတဲ့အတိုငျးသူ့ရဲ့အနှဈသာရက Tag battle ကိုယျ့ character ရဲ့ partner နဲ့တှဲပွီး အခွအေနပေေါငျးစုံကို ဖနျတီးနိုငျစှမျးပျေါမှာ မူတညျပါတယျ။ သူ့ရဲ့ထူးခွားခကျြ ရှကေ့ Marvel Vs Capcom လို Tag fighting game တှနေဲ့မတူတာကတော့ screen တဈခုထဲမှာ character လေးကောငျတဈပွိုငျတညျးခနြလေို့ရပါတယျ။ Easy to Learn, Hard to Master ဆိုတဲ့ဂိမျးလို့ ပွောလို့ရပါတယျ။
Hardcore သမားတှကွေားထဲ casual တှလေဲရှိနတောမို့ ပွိုငျပှဲဝငျပွီဆို တကယျမဝငျနိုငျတဲ့လူတှေ ပိုမြားနပေါတယျ။ ဒါပမေယျ့ viewership မြားတာကွောငျ့ EVO2019 ရဲ့ Sunday Finals ဂိမျးတှထေဲမှာနရောရထားပါတယျ။ Crossover Game ဖွဈပွီး Blazblue, Persona4, Under Night in-Birth (Unist), Arcana Hearts နဲ့ RWBY fan တှဆေိုရငျ အရမျးကွိုကျကွမှာ သခြောပါတယျ။ Unist လူသိပိုမြားပွီး EVO list ထဲတနျးဝငျလာတာ BBTAG ကိုထိပျဆုံးကကြေးဇူးတငျရမှာပါ။
ပွီးရငျ သကျတမျး ၁ နှဈဝနျးကငျြသာရှိသေးပွီး နောကျ ၂ နှဈ ၃ နှဈလောကျထိ support ပေးပွီး နောကျထပျ join မယျ့ series update တှရှေိနမေယျ့ဂိမျးမို့ anime fighters တှကွေိုကျရငျ ခုခြိနျခုနျဝငျလို့ အကောငျးဆုံးဂိမျးထဲမှာပါပါတယျ။
EVO2019 ရဲ့ Finals တှဆေော့မယျ့ရကျအတိအကတြှကေတော့ Friday မှာ Soul Calibur6ကိုအပွီးဆော့မှာဖွဈပွီး Saturday မှာ UNIST>> DragonBall FighterZ>> Samurai Shodown>> Mortal Kombat 11 တို့ကိုအပွီးသတျမှာဖွဈပါတယျ။
ကနျြတာကတော့ Sunday Final ပါ။ ဂိမျးအသဈ Announcement တှလေဲလုပျတတျတာမို့ အရမျးအရေးကွီးတဲ့နပေ့ါ။ Sunday Finals ကိုကွညျ့ခငျြရငျ သကျသကျလကျမှတျဝယျရပါသေးတယျ။ Sunday Finals အတှကျ ဂိမျးတှကေတော့ BBTAG>> Street Fighters V>> Tekken7နဲ့နောကျဆုံးအပိတျကတော့ Super Smash Bros Ultimate နဲ့အဆုံးသတျမှာဖွဈပါတယျ။
ထူးခွားခကျြအနနေဲ့ကတော့ EVO အတှငျးမှာ ပါဝငျတဲ့ဂိမျးအကုနျလုံးကို Steam မှာအခြိနျပိုငျး အလကားပေးဆော့ထားတတျလို့ စမျးကွညျ့လို့ရနိုငျပါကွောငျး!